Birta Goolka Oo Guuldarro Ka Badbaadisay Arsenal, Pepe Oo - Axadle | Wararka Africa
Birta Goolka Oo Guuldarro Ka Badbaadisay Arsenal, Pepe Oo
By Balaleti	 On Nov 22, 2020
Arsenal ayaa ka badbaaday guuldarro xilli casaan laga siiyay bilowgii qeybta labaad Nicolas Pepe iyagoo barbaro goolal la’aan ah ku qabtay kooxda Leeds United oo marti loo ahaa, iyadoo tababare Mikel Arteta uu ku fashilmay inuu hore u dhaqaajiyo Arsenal.
Gunners ayaa soo bandhigtay qaab ciyaareed laga niyadjabo iyagoo dhaliyay kaliya hal gool shantii kulan ee ugu danbeysay Premier League. Halka Leeds ay nasiibdarro ku aheyd inaysan badinin kulankaan ka dib seddex jeer oo ay birta garaaceen.
Nicolas Pepe ayaa qaatay casaankiisii ugu horeysay ka dib markii uu herdi sameeyay halka Bukayo Saka uu ka dhaawacmay Gunners dhamaadkii ciyaarta.
Arsenal ayaa ka dhacday kaalinta 11aad iyagoo leh 13 dhibcood waxay 7 dhibcood ka danbeeyaan kooxda hogaanka heysa ee Tottenham.
Leeds ayaa dhan walba kaga horeysay Arsenal qeybtii hore ee ciyaarta haddii ay ahaan laheyd kubad heysashada iyo darbooyinka goolka laakiin ma aysan ka faa’ideysanin fursadahood.
Weeraryahan Bamford ayaa ayaa tijaabo labo jeer goolhaye Leno halka Harrison uu shaqo fiican ka qabtay garabka bidix. Arsenal gadaal ayay u gurtay intii lagu sii dhawaanayay waqtigii nasashada.
Inkastoo booska Aubameyang la bedelay oo la geeyay booskiisa dabiiciga ah hadana waxba iskama bedelin qaab ciyaareedka weerar ee Gunners iyadoo Arsenal aan xitaa hal darbo loo diiwaangelinin qeybtii hore ee ciyaarta oo lagu kala nastay barbaro goolal la’aan ah.
Willian oo qaab ciyaareed niyadjab ah soo bandhigaya tan iyo markii uu ka soo wareegay Chelsea xagaagii ayaa la bedelay waqtigii nasashada iyadoo uu soo galay Nelson.
Laakiin xaalada Gunners ayaa noqotay ka dar oo dibi dhal markii casaan toos ah laga siiyay weeraryahankooda Nicolas Pepe kaasoo herdiyay Alioski, iyadoo garsoore Anthony Taylor uu dhacdada ka eegay shaashada taala garoonka dhiniciisa, wuxuuna casaan toos ah u taagay Pepe oo qaatay casaankii ugu horeysay ee waayihiisa ciyaareed.
Casaanka ka dib Leeds ayaa sarre u qaatay socodka ciyaarta iyagoo dardar geliyay weerarkooda. Daqiiqadii 64aad ayay u dhawaadeen inay shabaqa soo taabtaan markii darbo kulul oo ka baxday Dallas uu si fantastik ah u badbaadiyay goolhaye Leno.
Intii ay ciyaarta socotay Leeds ayaa sii xoojisay weerarkeeda iyadoo daqiiqadii 80aad uu Granit Xhaka u ogolaaday Rodrigo inuu kubada toosisto isagoo darbo kulul ku tuuray goolka, wuxuu garaacay goolhaye Leno laakiin kubada waxay ku dhacday birta.
Arsenal ayaa iyagana dhankooda fursad fiican helay daqiiqadii 84aad markii uu Bellerin kubad ku quudiyay Bukayo Saka laakiin xiddiga Ingariiska ayaa ka faa’ideysan waayay inuu kubada la garab maro goolhayaha oo ka badbaadiyay.
Arsenal ayaa mar kale birta loo garaacay daqiiqadii 87aad iyadoo uu ku dhawaaday inuu shabaqa soo taabto weeraryahanka Leeds Bamford.
Mar seddexaad ayay Leeds birta garaaceen waqtigii dhimashada ciyaarta iyadoo Gunners uu ka dhaawacmay Bukayo Saka.
Waxay ciyaarta ku soo dhamaatay barbaro goolal la’aan ah oo ay ku kala baxeen labada kooxood ka dib kulan adag oo dhexmaray.
Rising terrorist assaults testing Burkina Faso’s democracy amongst voters
the long process of appointing Fatou Bensouda’s successor